Tis The Season, Google Doodle wuxuu ku dabaaldegaa bilaabashada Fasaxyada - ITS
'Tis Season, Google Doodle wuxuu ku dabaaldegaa bilaabashada Fasaxyada'
Xilligii xilli ciyaareedka, google wuxuu ku amaanayaa bilowga jiilaalka iyo sanadka cusub 2016 xilli ciyaareedka Christmas.
NEW DELHI: Christmas, New Year occasions halkan iyo Google ayaa ku amaanay munaasabadda ugu weyn ee dooddeeda. Google ayaa ka baxday dooddii hore 'Tis xilli ciyaareedkii! si loo shaabadeeyo bilowga xilliga fasaxa.
Google Doodle wuxuu ku dabaaldegaa bilaabashada Fasaxyada
'Tis xilli-ciyaareedka loogu talagalay! Waqtiga jiilaalka waxay la socotaa dhaqamada kala duwan, si kastaba ha noqotee qaar ka mid ah sida gaboobay ama faraxsan sida rogrogista. Sanadihii hore ee sanadka soo laabtay, gabayadii ugu horeysay waxay ahaayeen kuwo gaar ah meelaha gaar ah, waxayna wadaagaan khiyaamo qaran oo u dhexeeya magaalooyinka. Ma ahan ilaa bartamihii 1800 ee ficilkii ahaa in laga yareeyo sida aynu u malaynayno, inagoo iskutallaabta ku faafay England iyo Western Europe.
Waqtigan dhexdiisa, bulshooyinka magaalooyinka waxay bilaabeen inay fududeeyaan asxaabta dibadda ee soo bandhigay muuqaal loogu talagalay shakhsiyaadka si ay ula falgalaan iyaga oo ku fikiray.
'Tis xilli ciyaareedkan! sidoo kale waa mid ka mid ah sooyaalka Christmas ee Olivia Newton-John iyo Vince Gill.
Doodle Maanta waxaa ku jira koox fanaaniin ah oo heeso leh, oo leh xiddig saddexagal ah oo fadhiya daqiiqad. Dhibaatada marka sawiruhu uu sahamiyo jiirkiisa dusha quruxda badan, waxa uu arkaa fariinta 'Tis Season' oo uu ku soo gebogebaynayo bogga muuqaalka ah ee loogu talagalay subtitle la mid ah.
Si la mid ah sida joogtada ah, waxaan hadda ka rajayn karnaa in Google muujin doono doodle kale maalin kasta, taasoo macnaheedu yahay maalin kasta oo ah xilli bubbly.
Diisembar 23 waxaa loo arkaa inay tahay maalinta ugu muhiimsan ee xilliga fasaxa ee Christmas iyo New Year.
Sidii aan rajeyneyno doodo badan oo xeel dheer usbuucan, halkan waxaan dooneynaa in qof walboo farxad geliyo kirismaska ​​iyo duruufaha aan hore loo arag.